News 18 Nepal || यी ३ राशि भएका युवती, जसले पुरुषलाई पहिलो भेटमै बनाउँछन् फिदा !
यी ३ राशि भएका युवती, जसले पुरुषलाई पहिलो भेटमै बनाउँछन् फिदा !
काठमाडौं । वृश्चिक राशिका युवतीको स्वभाव, व्यवहार एवं चालचलन आकर्षक मानिन्छ । यिनीहरूमा अर्काको मनको कुरा थाहा पाउने क्षमता हुन्छ । यो राशिका युवती हेर्दा बढी सुन्दर नभएता पनि यिनीहरूमा एक किसिमको फरक चुम्कीय आकर्षण हुन्छ ।
यिनीहरूको कुराकानी गर्ने आफ्नै प्रकारको विशेष शैली हुन्छ । यो राशिका युवती बहादुर तर भावुक हुन्छन् । यिनीहरूको मस्तिष्क तीक्ष्ण हुन्छ । यिनीहरूलाई कसैले पनि सजिलै बेवकुफ बनाउन सक्दैन । यिनीहरुलाई सबै कुरामा सफा चाहिन्छ ।
त्यस्तै, मिथुन राशिका युवती झट्ट हेर्दा निकै सुन्दर तथा आकर्षक मानिन्छन् । यिनीहरूको स्वभावले पुरुषहरूलाई सजिलै आकर्षक गर्ने गर्दछ । यिनीहरूको पुरुष साथी अधिक हुन्छन् । महिला मित्रहरू पनि कम हुँदैनन् । यो राशिका युवतीमा अर्काको मनको कुरा बुझ्ने अलौकिक क्षमता हुन्छ ।
यिनीहरू बहुमुखी प्रतिभाका धनी तथा चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गर्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरू दिमाग लगाउनु पर्ने वा बुद्धिसँग सम्बन्धित काममा बढी सफल हुन्छन् । त्यसैगरी वृष राशि हुने युवतीको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुन्छ । पहिलो भेटमै पुरुषहरू यी राशिका युवती प्रति आकर्षित हुने गर्दछन् ।
यो राशिका युवती निकै मेहेनती हुन्छन् र आफूले गरेको काममा सहजै लक्ष्य हासिल गर्छन् । यिनीहरूको बोल्ने शैली एवं सुन्दरताले सबैको मन लोभ्याउन सक्छ । यिनीहरू सौन्दर्य एवं कला प्रेमी हुन्छन् । कला क्षेत्रमा सजिलै सफलता हात पार्न सक्छन् । यिनीहरूको दिमागमा सदैव थुप्रै योजनाहरू बनिरहेका हुन्छन् ।
युवा युवती कस्तो जीवनसाथी खोज्छन् ?
यी हुन् ‘आइ लभ यू’ नभनी प्रेम ब्यक्त गर्ने १० तरिका
युवतीले तपाईलाई मन पराएको यसरी थाहा पाउनुहोस्
के तपाईको नङमा सेतो आकार चिन्ह छ ? मिल्छ यस्ताे फल
हातमा कतिवटा चक्र हुँदा कस्तो फल पाईन्छ ?
दम्पतीको यस्ता आनीबानी जुन कलहको निहुँ बन्छ
असोज ०१ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
२०७८ साल असोज महिनामा कस्तो छ तपाईको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
भदौ ३१ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
अनिल कपूर जवान देखिन पिउँछन् सर्पको रगत ?
यी हुन् विहिबारदेखि निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरु, अब के हुन्छ ?
चिनी प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँ, सुपथ मूल्य पसलमा कुन सामान कतिमा पाइन्छ ?
आजको मौसम पूर्वानुमान : यी स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं उपत्यकामा आज कति थपिए कोरोना संक्रमित ?